Borotiin - Wikipedia
Kani waa maqaal ku saabsan borotiinka. Boga "protein" halkan ayaa laga soo toosiyay.
Muuqaal 3D (3-Dhinac ah) muujinaya muuqaalka isku-dhiska xidhiidhka borotiin. Naqshada noocan ah waxaa markii ugu horeeysay laga soo xigtay sawiraan lagu qaaday raajada (X-ray ama alpha helices). Sida ka muuqata sawirka, qeybta dhexe ee xigta midigta waxaa ka muuqda iskuwareeg dheelan kaasi oo loo yaqaano prosthetic group ama heme group kuwaasi oo ka samaysan iskudhisyo intooda ugu badan ka kooban curiyaha Ogsajiinta.
Borotiin (; ; loogu dhawaaqo: /oʊˌtiːnz/ ama /oʊti.ɨnz/) waa iskudhis labo-malakuyuul, ama malakuyuul-yar, kaasi oo ka mid ah silsilad dheer oo amiino asiidh ah, taasi oo laga helo noocyo badan oo cuntada ka mid ah. Borotiinku wuxuu qabtaa qeeybo badan oo shaqo kala duwan ah, marka nooluhu cuno wuxuu ka qeyb-qaataa isku-habaynta DNA-da, falgalka metaboliisamka, wareegjinta unugyada, iyo safrinta malakuyuulada ku dhexjira jidhka noolaha. Sidoo kale, borotiinku wuxuu ka qeyb qaata korinta, habaynta iyo fududeynta shaqada caloosha
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Borotiin&oldid=214506"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 8 Agoosto 2021, marka ee eheed 22:58.